Nahoana no Mahafaly Antsika ny Miara-miasa Amin’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe Mongol Mooré Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngangela Nias Norvezianina Nyungwe Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sena Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshwa Turkmène Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
“Miara-miasa aminy izahay, ka miangavy anareo koa mba hanaiky ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra nefa tsy hanadino ny zava-kendren’izany.”—2 KOR. 6:1.
HIRA: 75, 74
NAHOANA NY ASA FITORIANA NO...
mampifandray antsika kokoa amin’Andriamanitra sy amin’ny mpiray finoana amintsika?
1. Inona no ataon’i Jehovah, na dia izy aza no Andriamanitra Fara Tampony?
NAMETRAHAN’I Jehovah fanontaniana maromaro momba ny zavaboary i Joba, indray mandeha. Niaiky izy fa i Jehovah no Andriamanitra Fara Tampony, izy no namorona ny zava-drehetra, ary tsy manam-petra ny fahendreny sy ny heriny. Hoy i Joba: “Fantatro izao fa mahay manao ny zava-drehetra ianao, ary tsy misy fikasana tsy hainao tanterahina.” (Joba 42:2) Vitan’i Jehovah daholo izay tiany hatao, ary tsy mila mpanampy izy. Be fitiavana anefa izy, ka manasa olon-kafa hiara-miasa aminy mba hanatanteraka ny fikasany. Efa hatrany am-boalohany izy no nanao izany.
2. Inona no asa lehibe nasain’i Jehovah nataon’i Jesosy?
2 Ilay Zanany lahitokana no noforonin’i Jehovah voalohany. Nasainy nanampy azy hamorona ny zava-drehetra io Zanany io avy eo. (Jaona 1:1-3, 18) Hoy ny apostoly Paoly momba an’i Jesosy: “Izy no nampiasaina tamin’ny famoronana ny zavatra hafa rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana izany, na fitondrana na fanjakana na fahefana. Tamin’ny alalany, ary ho azy, no namoronana ny zavatra hafa rehetra.” (Kol. 1:15-17) Nanome voninahitra an’ilay Zanany àry i Jehovah, ka nasainy hiara-miasa aminy izy io rehefa namorona an’izao rehetra izao izy. Noresahin’i Jehovah tamin’ny hafa koa io andraikitra lehibe nomeny ny Zanany io.
3. Inona no nasain’i Jehovah nataon’i Adama, ary nahoana?
3 Nasain’i Jehovah hiara-miasa aminy koa ny olombelona. Navelany hanome anarana ny biby, ohatra, i Adama. (Gen. 2:19, 20) Azo antoka fa nahafinaritra an’i Adama ny nanao izany. Nodinihiny tsara ny biby rehetra, ary nomeny anarana tsirairay arakaraka ny toetoetrany sy ny bikabikany. Vitan’i Jehovah izany raha nataony, satria izy no namorona ny biby. Be fitiavana anefa izy, ka i Adama no navelany hanao izany. Nasainy nanitatra an’ilay Paradisa tao Edena koa i Adama. (Gen. 1:27, 28) Nampalahelo anefa fa tsy nety niara-niasa tamin’i Jehovah intsony i Adama, ka lasa nijaly be izy sy ny taranany rehetra.—Gen. 3:17-19, 23.
4. Iza koa no niara-niasa tamin’i Jehovah, ary inona no nataon’izy ireo?
4 Mbola nanasa olon-kafa hiara-miasa aminy i Jehovah, tatỳ aoriana. Nasainy nanamboatra sambofiara, ohatra, i Noa, mba hiarovana azy sy ny fianakaviany tamin’ny Safodrano. Nanafaka ny Israelita avy tany Ejipta i Mosesy. I Josoa kosa nitondra azy ireo ho any amin’ny Tany Nampanantenaina. I Solomona indray nanorina an’ilay tempoly tao Jerosalema, ary i Maria lasa renin’i Jesosy. Nisy olona maro hafa koa niara-niasa tamin’i Jehovah mba hanatanteraka ny sitrapony.
5. Inona no asa azontsika atao, ary voatery ho nampanao antsika an’izany ve i Jehovah? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
5 Manasa ny mpanompony ankehitriny koa i Jehovah mba hazoto hanohana ny Fanjakan’ny Mesia. Maro ny karazana fanompoana masina azontsika atao. Misy amintsika anefa tsy afaka manao ny sasany amin’izy ireny. Na izany aza, dia afaka mitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana isika rehetra. Tsy voatery ho nampanaovin’i Jehovah antsika io asa io. Azony natao ny hoe tonga dia niteny avy tany an-danitra, mba ho ren’ny olona rehetra. Nilaza koa i Jesosy hoe azon’i Jehovah natao ny nampiteny ny vato raha tiany, ka ireny no nasainy nitory momba ny Mesia. (Lioka 19:37-40) Isika anefa no nasainy ‘hiara-miasa’ aminy. (1 Kor. 3:9) Hoy i Paoly: “Miara-miasa aminy izahay, ka miangavy anareo koa mba hanaiky ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra nefa tsy hanadino ny zava-kendren’izany.” (2 Kor. 6:1) Voninahitra lehibe ny miara-miasa amin’Andriamanitra. Tena faly isika manao izany. Nahoana?
MAHAFALY NY MIARA-MIASA AMIN’I JEHOVAH
6. Inona no tsapan’i Jesosy tamin’izy niara-niasa tamin’ny Rainy?
6 Efa hatry ny ela ny mpanompon’i Jehovah no faly rehefa miara-miasa aminy. Hoy ilay Zanany lahimatoa, izay antsoina koa hoe fahendrena: ‘I Jehovah no namorona ahy ho fiandohan’ny asa famoronany. Mpiasa tena mahay teo anilany aho, ary tena tia ahy isan’andro isan’andro izy. Falifaly foana aho teo anatrehany.’ (Ohab. 8:22, 30) Faly i Jesosy fa nahavita zavatra maro rehefa niara-niasa tamin’ny Rainy. Faly koa izy satria tena tia azy i Jehovah. Ary ahoana ny amintsika?
Ny mampianatra ny olona hahalala ny fahamarinana no asa mahafa-po indrindra (Fehintsoratra 7)
7. Nahoana no mahafaly ny mitory?
7 Nilaza i Jesosy fa samy mahasambatra na ny manome na ny mandray. (Asa. 20:35) Faly isika mahalala ny fahamarinana. Mahafinaritra antsika koa anefa ny miresaka an’izany amin’ny hafa. Mahita olona te hianatra momba an’Andriamanitra isika rehefa mitory. Faly erỳ izy ireo rehefa manomboka mahafantatra an’ilay Andriamanitsika sy ireo fampianarana sarobidy ao amin’ny Teniny. Ovany avy eo ny toe-tsainy sy ny fiainany. Mampihetsi-po antsika ny mahita an’izany. Miaiky àry isika fa tena ilaina ny mitory ny vaovao tsara. Lasa mihavana amin’Andriamanitra mantsy izay mihaino tsara azy io, ary mety hahazo fiainana mandrakizay. (2 Kor. 5:20) Aiza indray isika no hahita asa mahafaly sy mahafa-po noho izany?
8. Inona no tsapan’ny olona sasany noho izy ireo miara-miasa amin’i Jehovah?
8 Tsy ny mahita olona liana ihany no mahafaly. Faly koa isika satria mampifaly an’i Jehovah rehefa mitory, sady ankasitrahany ny ezaka ataontsika. (Vakio ny 1 Korintianina 15:58.) Hoy i Marco, any Italia: ‘Faly be mihitsy aho rehefa mieritreritra hoe manome ny tsara indrindra ananako ho an’i Jehovah. Izy mantsy tsy mora manadino an’izay zavatra ataontsika ho azy.’ Hoy koa i Franco, rahalahy any Italia: “Tena tiako ny miara-miasa amin’i Jehovah, ary tsapako hoe misy dikany ny fiainako. Mampahatsiahy antsika mantsy izy isan’andro hoe tia antsika, sady zava-dehibe aminy izay rehetra ataontsika ho azy, na dia heverintsika ho tsy misy dikany aza ilay izy. Misy fomba samihafa anaovany an’izany, ary anisan’izany ny Teniny.”
MAMPIFANDRAY KOKOA AMIN’I JEHOVAH SY AMIN’NY MPIRAY FINOANA
9. Nanao ahoana ny fifandraisan’i Jehovah sy Jesosy, ary inona no nahatonga izany?
9 Rehefa miara-miasa amin’ny olona tiantsika isika, dia lasa mifandray akaiky aminy, ary lasa fantatsika tsara ny toetrany. Lasa fantatsika ny tanjony ary haintsika hoe inona no ataony mba hahatratrarana izany. Efa an’arivony tapitrisa taona i Jehovah sy Jesosy no niara-niasa, ka lasa nifankatia be sy nifankahazo am-po. Hoy i Jesosy momba izany: “Izaho sy ny Ray dia iray ihany.” (Jaona 10:30) Tena niray saina izy ireo, ary nahay niara-niasa tsara foana.
10. Nahoana isika no lasa mifandray kokoa amin’i Jehovah sy amin’ny hafa rehefa mitory?
10 Niangavy an’i Jehovah mba hiaro ny mpianany i Jesosy. Nahoana? Hoy izy: “Mba ho iray tahaka antsika izy.” (Jaona 17:11) Lasa mahalala ny toetra tsaran’i Jehovah isika rehefa manaraka ny fitsipiny sy mandeha mitory. Lasa fantatsika koa hoe nahoana isika no tokony hatoky sy hankatò azy. Vao mainka àry isika hanatona azy, ary izy koa hanatona antsika. (Vakio ny Jakoba 4:8.) Tsy vitan’izay fa lasa mifandray akaiky amin’ny mpiray finoana amintsika isika, satria mitovy ny olana mahazo antsika sy ny zavatra mahafaly antsika ary ny tanjontsika. Miara-miasa sy miara-mifaly ary miara-miaritra isika. Hoy i Octavia, any Grande-Bretagne: “Lasa mifandray kokoa amin’ny mpiara-manompo aho rehefa miara-miasa amin’i Jehovah. Tsy hoe zavatra tsy dia misy dikany mantsy no mahatonga anay ho mpinamana, fa mitovy ny tanjonay sy ny zavatra ataonay.” Ary ianao? Te hifandray kokoa amin’ny mpiara-manompo aminao ve ianao rehefa mahita azy miezaka mampifaly an’i Jehovah?
11. Nahoana isika no hifankatia kokoa sy hifandray kokoa amin’i Jehovah rehefa ao amin’ny tontolo vaovao?
11 Efa mifandray akaiky amin’i Jehovah sy ny mpiray finoana amintsika isika izao. Vao mainka anefa isika hifandray amin’izy ireo ao amin’ny tontolo vaovao. Eritrereto ange ny zavatra miandry antsika rehefa hanjaka ny Mesia e! Hitsena an’ireo hatsangana amin’ny maty isika, ary hampianatra azy ireo momba an’i Jehovah. Hanova ny tany ho paradisa koa isika. Tena ho asa be izany, nefa hahafinaritra satria hiara-miasa isika sady ho lasa lavorary tsikelikely. Vao mainka hifankatia isika olombelona sady hifandray akaiky amin’Andriamanitra. ‘Hanome fahafaham-po ny fanirian’ny zavamananaina rehetra’ i Jehovah amin’izay.—Sal. 145:16.
MIARO ANTSIKA NY MIARA-MIASA AMIN’I JEHOVAH
12. Nahoana no miaro antsika ny asa fitoriana?
12 Mila miezaka mba tsy hivadika amin’i Jehovah isika. Tsy lavorary anefa isika sady mbola miaina eto amin’ny tontolon’i Satana, ka mora manahaka ny toe-tsain’ny olona sy ny fanaony. Toy ny hoe milomano ao anaty renirano isika, ary manosika antsika hiverina fa tsy handroso ilay rano. Mila miezaka mafy manohitra ny fikorianan’ny rano isika raha tsy te ho voasarika hiverina. Mila miady mafy koa isika raha tsy te ho voatarika hanana ny toe-tsain’ity tontolo ity. Manampy antsika hahavita izany ny fitoriana. Mifantoka amin’izay zava-dehibe sy mahasoa mantsy isika rehefa mitory, fa tsy amin’ny zavatra mety hampihena ny finoantsika. (Fil. 4:8) Manatanjaka ny finoantsika koa io asa io, satria manampy antsika hitadidy ny fampanantenan’i Jehovah sy ny fitsipiny. Manampy antsika hiezaka foana hanana toetra tsara izy io, amin’izay isika hahatohitra an’i Satana sy ny tontolony.—Vakio ny Efesianina 6:14-17.
13. Inona no nolazain’ny rahalahy iray any Aostralia momba ny asa fitoriana?
13 Tsy ho lany fotoana hieritreretana be momba ny olana mahazo antsika isika, raha mazoto mitory sy manao zavatra hafa mifandray amin’ny fanompoana an’i Jehovah. Hiaro antsika tsy ho voafandrik’i Satana izany. Hoy i Joel, any Aostralia: “Manampy ahy hahita ny zava-misy iainan’ny olona ny asa fitoriana, sady manampy ahy hitadidy hoe mahasoa ahy ny manaraka ny toro lalan’ny Baiboly. Mampianatra ahy hanetry tena foana koa ilay izy. Mila an’i Jehovah sy ny mpiray finoana amiko mantsy aho rehefa mitory.”
14. Inona no porofo fa manampy antsika ny fanahy masina rehefa mitory isika?
14 Rehefa mitory koa isika, dia mihamatoky hoe manampy antsika ny fanahy masina. Eritrereto, ohatra, hoe asaina mizara sakafo mahasalama amin’ny mpiray tanàna aminao ianao. Asa tsy andraisan-karama ilay izy sady tsy honerana izay vola laninao eo am-panaovana azy. Tsy ela anefa dia tsikaritrao fa tsy tia an’ilay sakafo ny ankamaroan’ny olona, ary lasa mankahala anao mihitsy aza ny sasany. Mbola hazoto hanao an’ilay asa ve ianao? Azo antoka fa ho kivy ianao, ka vetivety dia hiala an-daharana. Halan’ny olona sy ihomehezany koa isika rehefa mitory. Tsy kivy anefa isika fa mbola manohy foana, sady mbola vonona hamoaka vola am-paosy rehefa mitory. Midika izany fa manampy antsika ny fanahy masina.
TIA OLONA SY TIA AN’I JEHOVAH ISIKA MATOA MITORY
15. Nahoana no azo lazaina hoe miara-miasa amin’i Jehovah mba hanatanteraka ny fikasany isika rehefa mitory?
15 Miara-miasa amin’i Jehovah mba hanatanteraka ny fikasany koa isika, rehefa mitory ny vaovao tsara. Nahoana? Nataony hiaina mandrakizay eto an-tany ny olombelona. Izany no fikasany tany am-boalohany. Tsy novany ilay fikasany, na dia nanota aza i Adama. (Isaia 55:11) Tia antsika kosa izy, ka nataony izay hamonjena antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana. Nirahiny ho etỳ an-tany i Jesosy mba hanao sorona ny ainy ho an’ny olombelona. Tsy maintsy mankatò an’i Jehovah anefa ny olombelona raha te handray soa amin’io sorona io, ka nampianarin’i Jesosy azy ireo hoe inona avy no asain’i Jehovah ataony. Nasainy nampianatra an’izany koa ny mpanara-dia azy. Miara-miasa amin’i Jehovah mba hanatanteraka an’ilay fikasany àry isika, rehefa manampy ny olona hihavana aminy.
16. Inona no voaporofo rehefa mitory isika?
16 “Sitrapon’Andriamanitra ny hamonjena ny karazan’olona rehetra sy ny hananany fahalalana marina tsara ny fahamarinana.” (1 Tim. 2:4) Hita hoe tia ny mpiara-belona amintsika àry isika, rehefa manampy azy hahazo fiainana mandrakizay. Porofo koa izany fa tia an’i Jehovah isika. Nanontanian’ny olona i Jesosy, indray mandeha, hoe inona no didy lehibe indrindra nasaina narahin’ny Israelita. Namaly izy hoe: “‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany. Ny faharoa, izay toy izany ihany, dia izao: ‘Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’” (Mat. 22:37-39) Mankatò an’ireo didy ireo isika rehefa mitory ny vaovao tsara.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 10:42.
17. Inona no tsapanao noho ianao afaka mitory ny vaovao tsara?
17 Tena sambatra isika satria nomen’i Jehovah asa hatao. Mahafaly ilay izy, sady mampifandray antsika kokoa aminy sy amin’ny mpiray finoana amintsika, ary miaro antsika tsy hivadika aminy. Rehefa manao an’io asa io koa isika, dia manaporofo hoe tia azy sy tia ny mpiara-belona amintsika. Tsy mitovy ny zavatra iainan’ireo mpanompon’i Jehovah an-tapitrisany eran-tany. Miezaka mitady fomba itoriana anefa izy ireo, na tanora na antitra, na mahantra na manan-karena, ary na osa na matanjaka. Hoy i Chantel, anabavy any Frantsa: “Eritrereto ange e! Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra, ilay namorona an’izao rehetra izao, ilay Andriamanitra falifaly no maniraka ahy. Hoy izy: ‘Mandehana, dia teneno izay asaiko lazainao, ary ataovy amin’ny fo izany! Hanome hery anao aho, dia hanome anao ny Teniko. Hampiofana anao koa aho, sady hanome toromarika mazava tsara anao rehefa mila an’izany ianao. Homeko namana koa ianao, ary hanohana anao ny anjeliko.’ Tena tsy misy tsara noho ny hoe miara-miasa amin’i Jehovah sy manao an’izay asainy atao!”